Ukukhutshwa kweApple ukuJongwa kweTekhnoloji yeTekhnoloji ye-Safari 132 | Ndisuka mac
Ukukhutshwa kweApple iTechnology yokujonga kuqala 132
UManuel Alonso | 18/09/2021 17:00 | IMacOS Monterey
Ukujonga kwangaphambili kweTekhnoloji yoSafari inikezela ngombono wetekhnoloji yewebhu ezayo kwi-macOS nakwi-iOS. Ukuba ufuna ukuba phakathi kwabokuqala ukuzama itekhnoloji yoyilo yamvanje, iziphumo ezibonakalayo, izixhobo zophuhliso, kunye nokuninzi, kuya kufuneka ukhuphele esi sikhangeli sokulinga. Okwangoku inkampani yaseMelika isandula ukusungula Ukujonga kwangaphambili kweTech Technology 132.
Ayilombono mbi ukuzama le nguqulo kuba isekwe kuhlaziyo olutsha lwe ISafari 15 ifakiwe kwiMacOS Monterey kwaye ngenxa yoko ibandakanya amanqaku amaninzi eSafari 15. Kukho ibar yesithuba esitsha. Elungiselelwe ngenkxaso yamaQela eThabhu, kunye nenkxaso ephuculweyo yolwandiso lwewebhu yeSafari.
Kwakhona ine-Live Text function evumela abasebenzisi ukuba bakhethe kwaye banxibelelane nesicatshulwa kwimifanekiso kwiwebhu. Ewe kunjalo, inguqulelo ye-beta ye-MacOS Monterey kunye neMac M1 ziyafuneka. Kukho inkxaso yeeNqaku eziKhawulezayo ezisinceda songeze amakhonkco kunye nezinto eziqaqanjisiweyo zeSafari ezisinceda ukuba sikhumbule ulwazi kunye nemibono ebalulekileyo.
Uhlaziyo olutsha lwe-Safari Technology Preview iyafumaneka kwi-MacOS Big Sur kunye ne-MacOS Monterey, Inguqulelo yamva nje yenkqubo yokusebenza yeMac eya kukhutshwa oku kuwa. Iyafumaneka ngenkqubo yoHlaziyo lweSoftware. Uyazi, kwiiNkqubo ezikhethwayo kuye nakubani na okhuphele umkhangeli zincwadi. Amanqaku okupapashwa apheleleyo ohlaziyo ayafumaneka kwiwebhusayithi yeSafri yokuHlola iTekhnoloji.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IMacOS Monterey » Ukukhutshwa kweApple iTechnology yokujonga kuqala 132
Umsitho we-Apple, i-iPhone 13 entsha kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-Apple yenza ukuba izixhobo zokuthengisa ezintsha zifumaneke kubaphuhlisi